Djibouti Diyaar uma ahan iney raacdo wadadii Imaaraatka, Baxreyn ama Suudaan - Home somali news leader
Home NEWS Djibouti Diyaar uma ahan iney raacdo wadadii Imaaraatka, Baxreyn ama Suudaan
Hogamiyaha Dhowrka cisho uga harsan tahay ee Trump-ka Mareykanka wuxuu sii wadaa baadi goobkiisa aqoonsiga Israel. Suudaan kadib, bartilmaameedka cusub ee Washington waa Jabuuti. Cadaadis ayuu ku saaray madaxweynaha Jabuuti si uu ula jaanqaado Israel. Laakiin madaxweyne Geelle gabi ahaanba diyaar uma ahan inuu raaco wadadii Imaaraatka Carabta, Baxreyn ama Suudaan.
Sida uu sheegayo Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Jabuuti, dalkan ku yaal Bariga Afrika diyaar uma ahaa inuu rasmi ka dhigo xiriirka uu la leeyahay Israel. Dhinaca kale, hogaamiyaha wuxuu ugu baaqayaa Israa’iil inay ′ ′ Mowqif cad′ ′ ka qaadato dhanka Falastiiniyiinta.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa toddobaadkan ka hadlay hawlgallada sasabashada diblomaasiyadeed ee Israa’iil ee ay ku hawlaneed dhowr bilood. Wareysi uu siyey Horaantii todobaadkan oo ku begneyd Talaadadii, November 24, 2020 wargeyska The Africa Report, madaxa dowlada wuxuu sheegay in dalkiisa uusan qorsheyneynin inuu xiriir la yeesho Israel.
Ku dhawaaqiddan ayaa timid ka dib markii Imaaraadka, Baxreyn iyo Suudaan ay ku dhawaaqeen iney sii rasmi ah ka dhigeen xiriirkooda Tel Aviv. Mowjaddan uu Mareykanku taageerayo ee isu soo dhowaanshaha diblomaasiyadeed ee uu gadaal ka riixayo Donald Trump waxaa loo arkay inay tahay khiyaano lagula kacay Falastiiniyiinta, Falastiiniyiinta oo xudunta u ahaa xiisadda u dhexeysa Israa’iil iyo dunida Carabta muddo tobanaan sano ah.
Ismacil Cumar Geelle wuxuu ku yiri wareysigiisa ” “Shuruudaha ma bisla”Kuma qanacsani dowladda Israel maxaa yeelay waxay u diidaysaa Falastiiniyiinta xuquuqdooda lama-taabtaanka ah, Waxa kaliya ee aan weydiisaneyno Tel Aviv waa inaan u dhaqaaqdo dhanka nabada waxaana sameyn doonnaa markaa taas bedelkeeda Laakiin waxaan ka baqayaa ineysan waligeed sameyn doonin “.
Wax dhibaato ah kuma qabno Yuhuudda dad ahaan ama Israa’iil ahaan qaran ahaan. Qaar ka mid ah xitaa waxay u yimaadaan Jabuuti arrimo ganacsi iyaga oo wata Baasaboorkooda, muwaadiniinta reer Jabuuti-na waxay awoodeen inay u safraan Israel muddo hadda laga joogo 25 sano, ”ayuu yiri madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle, oo wareysi siinayay majaladda The Africa Report. Si kastaba ha noqotee, markii wax laga weydiiyay bal in dalkiisu raaci doono wadadii Baxrayn, Suudaan iyo Imaaraatka, isla markaana uu caadi ka dhigi doono xiriirka uu la leeyahay Israa’iil, wuxuu yiri “ma bislaan shurudaha”.
Runtii, DPWord shirkaddani waxay ka hortagneyd dekedda Doraleh ee Jabuuti inaysan u horumarin sidii la rabay, ayna ka hor-istaagin horumarka dekedda Dubai oo aysan tartanka la galin.
Madaxweynaha Jabuuti Cumar Geelle isaaga oo ku hadlaya magaca dadweynaha reer Jabuuti. waxaa ku cad ereyadiisa, Israel waa inay marka hore joojiso siyaasadeeda argagixisada ee ku wajahan Falastiin iyo Bariga Dhexe ka hor inta aysan ka hadlin xiriir kasta oo ay la sameyso Djibouti!
Previous articleChinese Chang’e-5 space probe successfully lands on the moon